Divorces र विवाह को तथ्याङ्क तथ्याङ्क। यो देशहरूमा विभिन्न समेट्छ।
छोडपत्र तथ्याङ्क युरोप मा आफ्नो नम्बर को नेता युक्रेन छ भन्छन्। दोस्रो र तेस्रो स्थान, क्रमशः, रूस र बेलारुस कब्जा। यस्तो संकेतक को कारण एक, विशेषज्ञहरु को एक प्रारम्भिक उमेर कल विवाह र आफ्नो पहिलो बच्चा को जन्म।
विवाह र छोडपत्र तथ्याङ्क युक्रेन एक हजार बासिन्दाहरू 7,6विवाह विरुद्ध 5,3divorces ल्याए भन्छन्। यी मापदण्डहरू दोस्रो स्थानमा मा 6.7 divorces विवाह विरुद्ध 5.0 रूस धक्का पछि। सम्मान को तेस्रो स्थानमा 4.5 वैवाहिक सम्बन्ध बनाम 3.8 divorces संग बेलारुस दिइएको। अन्य देशहरूमा, पारपाचुकेको दर शीर्ष तीन नजिक एक सानो थप भद्र छन् कि, को तथ्याङ्क। सबैभन्दा समृद्ध देशहरू छोडपत्र म्यासिडोनिया र मोन्टेनेग्रो, बोस्निया र हर्जगोभिना, इटाली मानिन्छ।
एकै समयमा, यो ठूलो चासो छ छोडपत्र, को कारण धेरै जोडे पटक प्रत्येक अन्य संग प्रेम मा पागल थिए। हालै तथ्याङ्क अनुसार, छोडपत्र लागि मुख्य कारण रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था वा दोस्रो आधा को दबाइ लत भनिन्छ। तर, यो पुरुष र महिला को प्रतिशत निर्दिष्ट गर्दैन। दोस्रो कारण लामो बिछोड अधिवक्ताओं। शीर्ष तीन finishes सामाग्री दुःखको कारण। यो यस्तो विवाहमा बच्चाहरु को कमी रूपमा अवस्थामा, छैन spouses बारेमा विशेष चिन्तित छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यस कारण पनि अंत सित स्थानमा छ।
निस्सन्देह, वैध विवाह प्रवेश, मा सहभागी प्रत्येक वैवाहिक संघ परेशानी र अवरोध बिना जीवन कल्पना गर्न प्रयास गरिरहेको छ। केही हरेक तरिका मा सामाग्री र नैतिक अर्थमा मा नवविवाहितहरूका मदत गर्न जसले नातेदार, को मद्दतले सफल। तर यस्तो अवस्थामा दुर्लभ छन्। सबैभन्दा भाग लागि, एक जोडी नै एक उज्जवल भविष्यको बाटोमा निर्माण गरिएको छ सिर्जना गरियो। रूस मा छोडपत्र तथ्याङ्क पनि किनभने परिवारको अलग सामाग्री समर्थन को गरिब एट्रिबिउट गरिएको छ। एक बजार अर्थव्यवस्था, र बस्नका रूस को क्षेत्र, विशेष गरी ठूलो शहर को क्षेत्र मा, पैसा को कमी एक समस्या हुन सक्छ। धेरै दम्पतीले यस्तो परीक्षण, यसैले धेरै divorces सामना गर्न सक्षम छन् छैन। साथै, showgirl छोडपत्र एक घर को अभाव छोडपत्र लागि undisputed कारण छ कि दाबी। आमाबाबुले संग आवास छैन दम्पतीलाई शान्त र असल जीवन गर्छ। केही कारणले मान्छे नै को क्षेत्र मा रह गर्न सक्दैन। रूस मा सुरु जो आवास कार्यक्रम, को ठूलो संख्या बावजुद, आवास को समस्या सबै यस्ता कार्यक्रम मा सहभागी हुन सकिन्छ, एउटै स्तरमा रहेका छ। यसबाहेक, अभ्यास शो रूपमा, उदाहरणका लागि, सामाजिक बंधक (हाल छ आवास मा खाँचोमा परेका लागि यस्तो कार्यक्रम), प्रस्ताव अपार्टमेन्ट, स्थान मा धेरै सफल छन् भन्ने प्राविधिक उपकरण पनि छैन।
छोडपत्र तथ्याङ्क देखाउँछ कि परिवार को संरक्षण को क्षेत्र साथै राज्य अन्य कानूनी संस्थाहरु माथि मूख्य धर्म संग देशहरूमा मामला मा राम्रो-बन्द देशहरूमा बाहेक। यो पूर्व देशहरूमा इस्लाम हावी जहाँ। त्यो इस्लाम पूर्वी देशहरूमा प्रतिबद्ध गर्न धेरै divorces अनुमति छैन। सोही, यो मात्र होइन पूर्वी देशहरूमा कडाई छोडपत्र छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, माल्टा क्षेत्रमा, तिनीहरूले निषेधित छन्।
हाम्रो देशमा divorces को तथ्याङ्क धेरै जवानहरूले विवाह गर्न हतारमा छन् भनेर देखाउँछ। पहिलो कठिनाइ, एक बच्चा को जटिल पालनपोषण, अक्सर छोडपत्र नेतृत्व। एक सामान्य नियम जस्तै, 22 वर्ष को उमेर मा विवाह गर्न रूस मा एक महिला। अभ्यास शो, यो युवा उमेर रूपमा। 28 वर्ष - समृद्ध इटाली समान संख्या मा 27 को बीच फरक हुन्छ।
कसरी आफ्नो पत्नी छोडपत्र
एक मानिस र एक महिला बीचको सम्बन्ध
अगस्ट 27 - राशिफल कन्या। विशेषताहरु र साइन अनुकूलता
मासु संग तातार Pies - Waraqa
मेरो मातृभूमि - यो छ ... एक "सानो मातृभूमि" के हो?
व्यावसायिक व्यवस्था र मौलिक सिद्धान्त
"शेवरलेट Niva" संशोधित। जहाँ सुरु गर्न?
रूसी सम्राट अलेक्जेंडर पहिलो
न्यूट्रिया: प्रजनन र घर मा मर्मतका
Hysteroscopy गर्भाशय - यो के हो? गर्भाशय Hysteroscopy: प्रकार, सङ्केत गर्छ, प्रक्रिया को लागत
ठूलो Dane - मानिसको सबैभन्दा मिल्ने साथी